Iinxalenye ngomshini CNC
Iinxalenye zomatshini zeCNC
Icandelo lokugaya i-CNC
Metal Ukunyathela lwaka
Isikhokelo esigqibeleleyo sazo zonke ezona grinders zikhula kakuhle zokuthenga ngo-2021.
ngomphathi ku 21-08-17
Kungakhathaliseki ukuba vape, uqengqe amalungu okanye uthathe rips bong; xa kufikwa ekutshayeni ukhula, kuhlala kukho into ekufuneka ubenayo: grinder efanelekileyo. Nazi izinto zethu ezikhethileyo zokugaya ezilungileyo kwimarike ngoku. Nokuba uyiphi i-newbie ye-cannabis okanye umntu othanda amava onamava xa kufikwa ...
Isixhobo esisetyenziselwa ukugaya ukhula oluqhekeza iintyatyambo ze-cannabis zibe ziingceba ezincinci zamalungu, amaqhuma kunye nezitya. Beka i-nug phakathi kwamazinyo we-grinder yokhula, emva koko ujike ngaphezulu nasezantsi kwe-grinder kwiindlela ezichaseneyo ukophula intyatyambo. Ukusila kweherb kunokubandakanya i-kief ca ...
Yintoni iGrinder kwaye uyisebenzisa njani kwiCannabis?
I-grinder ezaliswe zii-nugs (Igqabi) Ukuba umtsha kwi-cannabis, unokuba nemibuzo embalwa malunga ne-grinders kunye nendlela yokusebenzisa enye. Iigrafu zingathengwa phantse kuyo nayiphi na ivenkile yomsi okanye kwivenkile yentloko, okanye ungayalela enye kwi-Intanethi kwiindawo ezahlukeneyo zentengiso. Zingaba zilula njengekhadi lokusila (l ...
Kutheni usebenzisa iGrinder?
ngomphathi ku 21-08-09
Ukugaya imifuno zixhobo eziyimfuneko ekutshayeni iintyatyambo rhoqo. Nokuba uyaqengqeleka, upakisha isitya kwi-bong oyithandayo okanye ulayishe ipokotho yecephe, ukugaya okungaguquguqukiyo kubalulekile kumsi obalaseleyo. Iigrafu zikwenza ukuba abantu abatshayayo bafumane okuninzi ...
Izizathu ezi-3 eziKhulu zokuSebenzisa iHrab Grinder ukukhupha iiBuds zakho
ngomphathi ku 21-07-17
AMAQOQOSHO AMANQAKU AQALA NGOKUGCULA KAKHULA NGOKUGQIBELELEYO apha, sithanda ukuthi “Iseshoni nganye kufuneka iqale nge-SLX” kwaye yinyaniso leyo! Nokuba ukhetha ukonwabela imifuno yakho kwi-bong okanye ngokungacacanga, umbhobho okanye iphepha, ngakumbi ukuba ukhetha ukusebenzisa i-vaporizer ye-herbal, usetyenziso olufanelekileyo o ...
Isikhokelo esigqibeleleyo salo lonke ukhula oluhle ...